Lozam-pifamoivoizana nahatsiravina: potika tanteraka ilay 4X4, ahina ny ain’ilay mpamily | NewsMada
Par Taratra sur 21/02/2019
Lozam-pifamoivoizana nahatsiravina no nitranga teny amin’ny lalam-pirenena RN 11A mihazo an’i Vatomandry, afaka kelikely an’Antsampanana (RN 2), omaly tolakandro. Fiarakodia 4X4 roa no nifandona ka tena voa mafy ny iray izay tafapitika niala ny lalana mihitsy. Naratra mafy ireo olona telo tao anatiny, ankoatra ilay mpamily izay tena voa mafy tokoa.
Tohivakana hatrany ny lozam-pifamoivoizana eny amin’ny lalam-pirenena. Ny loza iray voalohany nitranga teny amin’ny RN 11 A tao Antsampanana Vatomandry. Fiara 4×4 roa no nifandona ka tafapitika lavitra mihitsy ilay fiara iray. Fiara 4×4 iray avy any Vatomandry no nifandona tamin’ilay fiara 4×4 iray hafa. Naratra mafy ireo olona tao anatiny ka isan’ny voa mafy tamin’izany ny mpamily tao amin’ilay fiara 4×4 iray sy ireo olona tao anatiny. Naratra mafy koa ny olona tao amin’ilay fiara iray, samy tsy nahatsiaro tena. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ireo nahita ny fitrangan’ny loza, vokatry ny fandehanana mafy no antony nanatonga ny loza teo amin’ireo fiara roa nifandona ireo. Olona efatra no tao anatin’ilay fiara 4×4 iray miloko mainty, roa teo aloha ary roa taoriana. Ny mpamily no voalaza fa tena voa mafy satria nosokirina tao anaty korontambin’ny fiara mihitsy izy, raha ny vaovao azo farany tamin’ny fotoana nanoratanay. Nentina namonjy hopitaly any Vatomandry avy hatrany ireo naratra ary mbola atahorana ny ain’ireo naratra sasany noho ny fahaverezan-dra be loatra.
Ankizivavikely iray hafa koa namoy ny ainy…
Ny loza iray faharoa kosa nitranga tao Ambohimahasoa RN 7, ankizivavikely iray handeha hianatra no nofaohin’ny fiara 4×4 ka maty tsy tra-drano tao an-tampon-tanànan’Ambohimahasoa, omaly tolakandro. Voalaza fa fiara marika Starex ity namoa-doza ity. Teo amin’ny Epp Annexe Antaninarenina ampitan’ny lapan’ny tanàna ao Ambohimahasoa no nitranga ny loza. Raha ny fampitam-baovao voaray hatrany, nandeha mafy ilay fiara ary nisongona taksiborosy Sprinter iray teo alohany ka nifatratra tany amin’ilay ankizivavikely mpianatra. Vokany, vaky ny lohany, tapaka ny feny, nandriaka eran’ny arabe ny ra. Voalaza fa nandeha mafy ilay fiara nefa miditra ny tanàna izay betsaka olona mifamezivezy. Niteraka hatezerana teo amin’ireo olona nahita ny fitrangan’ny loza ny fahafatesan’ity ankizivavikely ity.
Ny fandehanana mafy hatrany matetika no mahatonga ny loza eny amin’ny lalam-pirenena ka tokony hitandrina hatrany ny mpamily mba hialana amin’ny loza toy izao. Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra koa ireny lalana simba ireny izay antony iray koa mitarika ny loza.